အမျိုးသားများအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှု | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်လိမ်းဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ကုသမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုအမျိုးမျိုးခံယူခြင်းများပြုလုပ်နေသည်။ ရှာပါ အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်သော်လည်းဤနေရာတွင်သင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမည့်အကောင်းဆုံးများကိုရှာဖွေပြီးနောက်မှသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ရန်ကမ္ဘာသစ်ရှာဖွေပါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပြီးငယ်ရွယ်ပြီးလှပအောင်ထားပါ အိုမင်းခြင်း၏ကြီးမားသောဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်သင်ငယ်ရွယ်ပြီဆိုလျှင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်ဤအကြံပြုချက်များကိုအသုံးချပါ။
အမျိုးသားတွေမှာ Smart Casual ဆိုတာဘာလဲ
por Alicia tomero လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါင်း .
ဖက်ရှင်များကို စတိုင်လ်နှင့် ဆင်းသက်လာခြင်းဖြင့် ချဲ့ထွင်ထားပါသည်။ အယူအဆများနှင့် မူလအစများကို သတိပြုရန်မှာ မလွဲမသွေဖြစ်သည်...
por Alicia tomero လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
သင်တုန်းဓားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြတ်တောက်ရန် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေခြင်းသည် အံဩစရာ ကောင်းသော်လည်း သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံနိုင်ပါသည်...
မျက်နှာပေါ်ရှိ အမည်းစက်များကို သန့်စင်နည်း
por Alicia tomero လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
အမည်းစက်တွေက စိတ်ညစ်စရာဖြစ်ပြီး ချွေးပေါက်ထဲမှာ ပိတ်ဆို့စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်...။
ဆံပင်လှူနည်းကို တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး တွေးဖူးတာ သေချာပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ လူတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြောင်းလဲချင်ကြတယ်..။
Keratin ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ
Keratin သည် မပျော်ဝင်နိုင်သော သဘာဝပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အလှအပဆိုင်ရာ ကုသမှုများတွင် အထူးသဖြင့် ဆံကေသာထိန်းသိမ်းရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
ဤနှစ် 2022 အတွက် မုတ်ဆိတ်တိုတိုသည် လမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ဒါဟာ ယောက်ျားပီသခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယောက်ျားပီသတဲ့ လက္ခဏာလည်း ရှိပါသေး…
por Alicia tomero လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
ယောက်ျားလေးတော်တော်များများအတွက် ရည်းစားထားဖို့ဆိုတာ စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုပါပဲ။ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
por Alicia tomero လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အောင်နိုင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးဘဝတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျဆင်းသွားမည်မဟုတ်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ မကြာသေးမီက အမျိုးသမီးများ...
por Alicia tomero လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝတစ်ခုလုံးသည် စိန်ခေါ်မှုနှင့် တိုးတက်မှုကို အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများက ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားကြပါတယ်..။
'စတိုင်လ်ဝတ်ခြင်း' သည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် ကွဲပြားသော ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့...
ဝှေးစေ့အတွင်း အဖုအကြိတ်များ ပေါ်လာခြင်းသည် အများအားဖြင့် ပြဿနာ အမျိုးအစား အချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားများအတွက် gradient ဆံပင်ညှပ်
သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုမှန်ကန်စွာရိတ်ရမည်နည်း
သုံးရက်ကြာမုတ်ဆိတ်မွေး - သင်ရှောင်သင့်သည့်အမှားများ
တစ် ဦး ကဖက်ရှင်လမ်းကြောင်း: Hipster မုတ်ဆိတ်
မုတ်ဆိတ်များ - ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပါးစပ်ဖျားကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ
အဘယ်သို့သော sideburns မျိုးကိုသင်ပိုမိုဆွဲဆောင်စေ?
ရိတ်ပြီးတဲ့နောက်ယားယံခြင်း ၁၀ မျိုး